माधव नेपाल पक्षलाई बाँदर भन्दै राष्ट्रिय सभामा कविता सुनाएपछि कोमल ओलीको ब्यापक आलोचना, वलीले फेरी के दिइन् स्पष्टीकरण ? – Ramailo Sandesh
माधव नेपाल पक्षलाई बाँदर भन्दै राष्ट्रिय सभामा कविता सुनाएपछि कोमल ओलीको ब्यापक आलोचना, वलीले फेरी के दिइन् स्पष्टीकरण ?
काठमाडौ । मंगलवार राष्ट्रिय सभामाको बैठकमा एमालेबाट सांसद कोमल वलीले वाचन गरेको एक कविताका कारण उनी निकै आलोचित बनिन् । उनले नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्षलाई लक्षित गर्दै कविता सुनाएकी थिइन् । त्यसमा कसैको नाम त उल्लेख थिएन तर राजनीतिक विषयबस्तु समेटिएको ‘बाँदरको जमात र अमृतपानको सपना’ नामको कविता उनले सुनाएकी थिइन् ।
सो कविता पछि उनको निकै आलोचना भयो । सामाजिक सञ्जालमा त्यसवारे पक्ष र विपक्षमा निकै चर्चा भए । धेरैले आलोचना गरेका छन् । कवितामा उनले एमालेका नेपाल पक्षलाई बाँदर, छेपारोजस्ता शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ । कतिपयले गायिकासमेत रहेकी सांसद वलीको कडा आलोचना पनि गरिरहेकी छन्।
व्यापक आलोचना हुन थालेपछि सांसद वलीले स्पष्टीकरण नै दिएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘मेरा धारणाहरू कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित छैनन्। देश समाज र जनताप्रति समर्पित छ। देश र जनताका लागि बोल्दा कलमहररू कसैलाई निरुत्साहित गर्न चल्नुपर्छ भन्ने छैन। कसैलाई निरुत्साहित गर्न व्यक्तिगत कुरा उठाएर बहादुरी पनि प्राप्त हुँदैन। यो कुरा भौतिक शरिरको अन्त्य हुनेहरूले सोच्नुपर्छ।’
उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगलाई भन्यो – हामी मिल्न सकेनौं, प्रक्रियामा जानुस्
माओवादी छोडेर एमालेमा आएका यि ४ नेता प्रचण्डविरुद्ध अदालत जाँदै